Dowladda Soomaaliya oo ciidanka ku amartay in aysan dhibaateyn shacabka | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo ciidanka ku amartay in aysan dhibaateyn shacabka
Dowladda Soomaaliya oo ciidanka ku amartay in aysan dhibaateyn shacabka
Wasiirka Amniga Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa ku amray laamaha Ammaanka dowladda Soomaaliya in ay joojiyaan dhibaatada ay ku hayaan shacabka kunool Magaalada Muqdisho markii la xiro wadooyinka.
Waxaa uu sheegay in ciidanka Ammaanka laga rabo in ay u turaan shacabka, islamarkaana kuwooda dhibaateysan aysan u diidin in la maro wadooyinka.
Wasiirka oo ka hadlayay sababta maanta wadooyinka Muqdisho loo xiray ayaa sheegay in ay la xariirto sababo amni oo aan loogu tala galay in lagu dhibaateeyo shacabka Caasimada.
Shacabka Muqdisho ayaa maanta dhibaato kasoo gaartay markii dowladda dhexe ay amartay in la xiro wadooyinka.
Ciidamada Ammaanka Soomaaliya ayaa Maanta waxaa ay xireen qaar kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee Magalada muqdisho, iyaga oo u diiday Gaadiidka daweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo Mooto Bajaajta inay wadooyinka qaar isticmaalaan.
Wadooyinka muhiimka ah ee Maanta xiran ayaa waxaa kamid ah qeybo kamid ah wadada Maka-Almukarama,Wadooyinka soo gala degmooyinka Xamar Jajab iyo Waaberi iyo Wadada Isgoyska Jubba, iyada oo lagu arkayay Ciidamada Dowladda oo u diidaya isticmaalka gaadiidka kala duwan.
Previous articleQM oo ka hadashay xil loo Magacaabay Sarkaal ka howlgalay Soomaaliya
Next articleGuddiga Qoxootiga iyo Barkacyaasha KG oo Maanta Deeq Raashin ah kala wareegey Ciidamada Amisom